Maxaa Cusub – Page 8 – Shabakadda Amiirnuur
Dowladda Federaalka ah oo Haweenay uur leh ku dishay Muqdisho.
Haweenay uur lahayd ayaa ku dhimatay Magaalada Muqdisho kadib markii ay dileen Ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka ah. haweenayda oo Xaamilo ahayd oo Bishii Sagaalaad ku jirtay waxaa haleelay xabado ay isweydaarsadeen laba askeri oo ka tirssan Dowladda Federaalka ah. dhaawac daran ayaa haweeneyda soo gaaray taasina waxay sababtay in […]
Dhegeyso Xalqada 2-Aad Ee Wareysiyada Maxaabiistii Xabsiga Boosaaso.
Idaacadda Afka Xarakada Shbaabul Mujaahidiin ku hadasha ee Al-analus ayaa baahisay qaybtii labaad ee Wareysiyo tixana ah oo ay ka qaaday qaarka mid ah Maxaabiis gaareysa Afar Boqol oo ruux kuwaasoo Xarakada xoog uga soo furatay Xabsiga ugu weyn Magaalada Boosaaso ee Xarunta gobalka Bari halkaasoo Maamulka Puntland ka taliyo. […]
Qarax Naf hurnimo oo khasaarooyin sababay
Qarax aad xoogan o Nafhurnimo ayaa Maanta ka dhacay Deegaanka Toora toorow oo ka tirsan Gobalka Shabeelaha hoose kaasoo lala beegsaday Ciidamo cadaan ah iyo kuwo Soomaali ah oo la shaqeeya ha yeeshee ku suntay in ay Dowladda Federaalka ah ka tirsan yihiin. Ciidamadaan oo duulaan ah kana yimid dhanka […]
Dhegeyso Jawaasiis lagu dilay Gobalka Gedo
afar Jawaasiis ah ayaa Shalay gelinkii dambe lagu dilay Magaalada Ceel Cadde ee Gobalka Gedo iyadoo dad badan soo buuxiyeen goobtii dilku ka dhacayay. Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa Xukunkaas dilka ah ku fulisay Afarta xubnood waxaana qaaddi goobta ka hadlay uu sheegay in nimankaan jawaasiista ahaa qirteen eedeyaymaha loo soo […]
Dhegeyso Xalqada 1-aad Ee Wareysiyada Maxaabiistii Xabsiga Boosaaso.
Idaacadda ku hadasha Afka Alshabaab ee Al-andalus ayaa Xalay Baahisay qaybta koowaad ee wareysiyo Taxane ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah Boqolaal Maxaabiis ah oo ay Xarakada Shababul Mujaahidiin ku soo furatay dagaal ay ku qaaday Xabsiga ugu weyn Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobalka Bari. Maxaabiistaa oo […]
Sarkaal ku dhaawacmay Muqdihso iyo ilaaladiisa oo dhimasho iyo dhaawac noqday.
Sarkaal ka tirsan Dowladdda federaalka ah oo lagu Magacaabo Cumar cabdiraxmaan ayaa Xalay lagu dhaawacay qarax ka dhacay agagarka Afeysyooni oo ka tirsan Magaalada Muqdisho iyadoo Ciidamadii la socdayna qaar dhinteen kuwana dhaawacmeen. Daahir Maxamuud Geelle oo ah Murashax Madaxweyne ayaa Sheegay in Kornyl Cumar Cabdiraxamaan uu ahaa ninka asiga […]
DHEGEYSO:-WAA SIDEE HEER KULKA MAGAALADA BOOSAASO OO DHAWAAN DHAWAAN ALSHABAAB MAXAABIIS KU XIRNEYD XOOG KU FURATAY?
Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobalka Bari waa Magaalo aad u kulul Cimilo ahaan waxaana heer kulkeedu gaaraa derejo sare oo afartan digree ah. Xiliyada qaar waxaa dhaceysa dabeyl kulul oo culeyskeeda leh waxaana la arkaa dadka oo dhibaatada kuleylka dareemaya. bilaha qaarkood waa laga qaxaa Magaalada iyadoo la arkayao […]
Dhegeyso:-Sheekh si Sharci ah uga hadlaya soo furashada Maxaabiista Muslimiinta.
Sheekh Cabdiraxmaan Firin oo ka mid ah Culumada Diinta Islaamka ayaa si qota dheer waxa uu kaga hadlay waajibaadka Dadka Muslmiinta ah ka saaran soo furashada Muslimiinta kale e Xabsiyada ku jira. Sheekha ayaa faah faahiyay siyaabaha looga qayb qaada karo soo furashada Muslimiinta oo ay ka mid yihiin in […]
War bixin ku saabsna weeraradii ugu dambeeyay.
Jubbooyinka waxaa xalay la weeraray saldhiga Murtadiinta ee deegaanka Yoontooy ee duleedka Kismaayo khasaara culus ayaana murtadiinta lagu gaarsiiyay dagaalkaas. Ciidamada Xarkaada Shabaabul Mujaahidiin ayaa Xalay Weerar ku qaaday Ciidamo ka tirsan Maamulka jubband oo ku sugnaa degaanak Yoontooy ee Duleedka Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobalka Jubada hoose, dhinac kale […]
Gudiga la socodka Xaaladaha Karoonaha ee Wilaayadka oo war soo saaray.
Guddi qaabilsan la socodka Xaaladaha Cudurka Karoona oo ka dhisay Wilaayaatka Islaamiga ah ayaa soo saaray war Karoonaha la xariira. Dr Xanaf Cabdi Sheekh Aadan oo Gudigaas ka tirsan ayaa sheegaya in loo baahan yahay in Dadku ay taxader dheeraad ah oo Karoonaha la xariira la yimaadaan ugu horeyna ay […]